Leggings na leggings
Leggings ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ha, leggings bụ ụdị nkedo siri ike nke ákwà na-agbanwe. Taa, leggings nwere ike ịnọ dị ka akụkụ onwe ya nke oyiyi, ma bụrụ ihe mgbakwunye na uwe ejiji ma ọ bụ uwe.
Ngwongwo na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka isi ihe ndị ekike. A na-eji ákwà dị arọ na-emegharị ya ma nwee ike ikwu okwu ma ọ bụ ihe dị mfe nke ọhụụ. Ndị a gụnyere:
akpa azụ azụ;
okpukpu abụọ n'èzí ụkwụ.
Ụdị kachasị mma nwere ike ijikọta ọtụtụ agba ma jiri rhinestones na ihe ndị ọzọ na-egbuke egbuke chọọ ya mma. Nhọrọ dị otú ahụ kwesịrị ekwesị maka mgbede. Ịmepụta ihe oyiyi dị oke ezu iji kwado pọọsụ mbụ ahụ na uwe elu ma ọ bụ n'elu ya na jaket cocky.
Maka ndụ a na-adị kwa ụbọchị, ihe ntanetị ndị eṅomi n'okpuru jeans zuru okè. A na-ahọrọ ihe maka ihe nlereanya dị otú a dị nro ma na-agbanwe agbanwe, ma ụkpụrụ ahụ kwesịrị igosi nkọwa nke ihe ntanye denim. A na-egosipụtakarị ya na acha acha anụnụ anụnụ na amaokwu.
Egwuregwu siri ike
Egwuregwu ndị na-agba ọsọ bụ ihe atụ dị mma maka nkedo ma ọ bụ ọdịdị ọdịnala. A na-eme ha na-adịgide adịgide, ma dị mkpa ma nwee usoro dị iche iche. A na-eyi akwa ụdọ na-eyi n'okpuru obere uwe, mgbatị ogologo ikpere ma ọ bụ sweaters elongated. O nwere ike ile anya nke ukwuu. Ma ndị stylists dọrọ aka ná ntị, ọ bụrụ na ịhọrọ ogologo oge uwe ahụ, mgbe ahụ, ihe oyiyi ahụ nwere ike ịdị nwayọọ.
Nnukwu nhọrọ nke losin na-anọchite anya Italian nke Calcedonia. Ọ bụ na nchịkọta ha na ị ga-ahụ otú e si ejikọta eriri ahụ dị mkpa na akwa uwe. Site n'enyemaka nke uwe ogologo ọkpa, ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi azụmahịa ma ọ bụ akwa ejiji mgbede.
Echefula na ihe dị mkpa ga-abụ ezigbo onye nnyemaaka iji mepụta akwa mkpuchi. A sị ka e kwuwe, a na-ejikọta ha na uwe elu na ọkụ n'elu. Ụfọdụ ejiji ejiji ga-eme ka ihe oyiyi gị bụrụ ihe pụrụ iche. Oge ezumike ga-abụ monophonic ma ọ bụ nwee usoro dị mgbagwoju anya na agba agba.
Obere nwa obere jaket
Ịzụ ahịa na Thailand
Tatyanka jiri akwa na-akwa
Uwe oyi maka ndi di ime
Uwe Nkume Island
Ihe ndị inyom na-ekpo ọkụ
Uba akpụkpọ ụkwụ Zebra
Ebube na-acha ọcha na-acha ọcha
Uwe uwe ojii obere
Akpụkpọ ụkwụ Balmain
Ịzụ ahịa na Rhodes
Ewu na-ekpuchi si ewu
25 ụdị nkịta dị iche iche
Fetal hypoxia - ọgwụgwọ
Pyshki na kefir
Ekpere si anya ojoo
Oriental ìgwè nke nwamba
Ọnụ ụzọ nke osisi oak
Chineke nke ọmụmụ n'etiti ndị Gris
Enwere ike imeghi shpu n'oge ime?
Nkpuchi maka ntutu na mmanu almond
Mmetụta ndị dị mkpirikpi
Hematoma na ihu
Epeekere Peanut - uzommeputa
Kittens nke Canada Sphynx
Mmetụta nke mmetụta mmadụ
Ihe ndị e ji aka mee
Pershit akpịrị - olee otú ngwa ngwa gwọọ?